Munyori: Multiples vanyori, repack kubudikidza Ricardo_tv, dzinowedzerwa Rikoooo
Rikoooo panoratidza rengarava ari kambani LTU (Lufttransport-Unternehmen kuti "mhepo chokufambisa zvebhizimisi") iro muna 2009 akabatanidzwa Air Berlin. rongedza Uyu chinokosha chinyorwa pakuyeuka chii chaiva ichi boka kubva 1955 kuna 2009.
Discover achibhururuka ari 10 ndege enhoroondo kuti akanyora LTU nezvikepe kubva 1955, kubva Lockheed L-1011 TriStar panguva Airbus A320 kuburikidza Bae 146-200, zvose izvi ndege kuchaita kumutsidzira kurota ane mbiri kare. ndege neimwe inopiwa rongedza iri vakapakata kushanda unhu rakapotsa Cockpit uye 2d remadziro. chipo Uyewo, tsika unorira mumwe muenzaniso kunobva injini.
rongedza ichi akaedzwa uye anotenderwa kuti FSX-SP2 uye Yechipiri & Prepar3D v1, zviri pamwe kunoenderana shanduro 2 pamusoro Prepar3D uye dzimwe shanduro FSX, kuti miedzo yako.
Nemhaka siyana freeware Vanyori akabatanidza pasuru iyi ravo rakakura basa.
List ndege pamwe panze uye mukati Photo:
Downloads: 287 845
Downloads: 95 196
Downloads: 20 062
Downloads: 22 801
Downloads: 420 190
Downloads: 54 700
Downloads: 46 636